ယူတာပဲရှိတယ်၊ လုံးဝမပေးဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယူတာပဲရှိတယ်၊ လုံးဝမပေးဘူး
Posted by phone_kyaw on Feb 12, 2013 in Copy/Paste | 12 comments
နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာပညာရှင်တွေဆီကနေ အကူအညီတောင်းတယ်။ သူတို့ က အဲဒိနိုင်ငံသားခံယူထားလို့မြန်မာပြည်မှာ လွှတ်တော်အမတ်မပြောနဲ့ နိုင်ငံသားတောင်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ နေပါအုံးဗျ…ခင်ဗျားတို့ လိုချင်တော့ သူများရဲ့ အကူအညီတောင်းတယ်။ ယူတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ နေရာလေးဖယ်ပေးရမှာတော့ အင်မတန်ကြောက်တဲ့လူတွေ။ တရားလား မတရားလားဆိုတာလည်း ပြန်စဉ်းစားကြပါအုံး။
ဖြစ်သင့်တာက သူများနိုင်ငံတွေလို နှစ်နိုင်ငံသားခံယူပိုင်ခွင့်ပေးရမှာ။ မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်သွားတဲ့ လူတွေက သန်းချီပြီရှိတော့ ဒီလူတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးမ၀င်တော့ဘူးလား။
နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်ခံယူလို့ မြန်မာပြည်နဲ့ လူထုကို ဘယ်သူမှ သစ္စာမဖောက်ဘူး။ အားလုံးက ငပိနံ့ ကင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ ဒါကို လူတိုင်း သဘောထားကြီးကြီးထားပေးဖို့ လိုတယ်။ အခုတော့ သူတို့ ကပဲ တိုင်းပြည်ကို ချစ်သလိုမျိူး။ စောက်တလွဲ။
တချို့ သော နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေ နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာပေမဲ့ အဲဒိနိုင်ငံသားအဖြစ် မခံယူခဲ့တာကို ဂုဏ်ယူပြီးပြောနေတယ်။ ဒါက လူနဲစုပါ။ သူတို့ ဖာသာ သူတို့ မခံယူချင်လို့နေတာကို ငါတို့ က နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူတဲ့လူတွေထက်ပိုလို့တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာရှိတယ်ဆိုပြီး ကြံဖန်ဖင်ခေါင်းကျယ်တယ်။ ကြံဖန်ပြီး အစိုးရရဲ့ အာဏာပိုင်ငတုံးတွေကို ဖားသလိုမျိူးပဲ။
ဒါကို အစိုးရဟုခေါ်သောလူတစ်စုကလည်း အဟုတ်ကြီးထင်ကြတယ်။
ထိုင်းမှာနေတုန်းက ဘာ့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ် မခံယူလဲ။ သြစတျေးလျနိုင်ငံရောက်မှ သြစီနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူလို့ ပေါ့ဆိုပြီ မတူတဲ့အချက်ကို ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦးက မေးဘူးတယ်။ သူကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားမယူခဲ့ပါဘူး ထင်တာပဲ။ သူက သူ့ ကိုယ်သူ ဟုတ်လှပြီထင်နေတယ်။
ထိုင်းမှာနေတုန်းက ရရင် ယူတာပေါ့ဗျာ။ မရလို့တရားမ၀င်ဖြစ်ခဲ့တာ လူတိုင်းအသိပဲ။
ဘယ်နိုင်ငံသားပဲ ခံခံ၊ ငါကတော့ မခံတာက ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ပါဗျာ။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။
သူများဆီက ယူတာရှိသလို၊ ကိုယ့်ဆီကလည်း ပြန်ပေးရတာဆိုတာကို အားလုံးနားလည်ဖို့ လိုတယ်။ ယူဖို့ ချည်းပဲ ခေါင်းထဲမထည့်နဲ့ ပေါ့ဗျာ။
ချိုင်းနားက.. ချိုင်းနီစ်းတွေ.. ဒီအတိုင်းဝင်လာ.. မြန်မာပြည်ထဲ.. တရုတ်လုပ်.. မူရင်းနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လေး.. တောင်းတောင်မကြည့်ပဲ.. မြန်မာနိုင်ငံသားပေးထားကြတာကိုခွင့်ပြုထားနိုင်ရင်.. ပြည်ပကမြန်မာတွေကို.. ဒူဝယ်စစ်ဒဇင်ခွင့်ပြုသင့်တယ်..။
မြန်မာပြည်ရဲ့.. အဓိကပြဿနာက.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းမရှိတာပဲ..
သဂျီးနဲ့ ကဖုန်းကျော်ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်
ကိုယ့်နိုင်ငံ တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့်သူဆိုရင် စစ်ဒဇင် ပေးသင့်ပါတယ်
ဒါမှ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ပြန်ခေါ်နိုင်မှာပါ
ဒို့ရဲ့ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေလည်း အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်တယ်ဆိုပျီး
စစ်ပညာသွားသင်ကတည်းက ဟိုမြို့ဟိုရွာမှာချောင်သလိုနေမယ် မှောင်ရင်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့
( ငါ့တိုင်းပြည်တွက် ငါ ပြန်ကိုးးလာမယ် )
ကဲ ယနေ့ပြည်ပမှာနေတဲ့ ဘယ်သတ္တဝါ ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့ဘူးလဲ??????????
သဂျီးတို့ စယာကျောင်ဂျီးတို့ဆို ပိုတောင်ဆိုးဦးမယ် :low:
သတ္တိရှိလို့ သက်စွန်းကြိုးပန်းတိုက်တဲ့ကောင်တွေ ရှေ့တန်းမှာ အသေဆိုးနဲ့သေကုန်ပြီ
ကျန်နေတာ ဗိုက်ပူပူထိပ်ပြောင်ပြောင်နဲ့ လီးလိုလိုမှိုလိုလိုကောင်တွေချီးဘဲ
နိုင်ငံတွင်းမှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရလို့ နိုင်ငံခြားက အကူညီယူပြီး နိုင်ငံခြားသွားတယ်
နွားတွေ !!!!!!!! ငါ့လခွီး
တစ်နေ့တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲကနေ ဘယ်နေရာမှာ ပြည်သူတွေအသေဆိုးနဲ့သေကြမလဲဆိုတဲ့
ခင်ဗျားတို့ ပြည်ပမှာသွားနေတဲ့သတ္တဝါတွေဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင်
( သူများကြိုးစားပမ်းစားတည်ထားတဲ့စေတီကို ငါထုံးသုတ်ပေးမှသပ္ပါယ်မှာဆိုတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ )
ဆိုခြင်တာက တိုင်းပြည်ကြီးက ဆင်း၇ဲနေသေးတယ် ခေတ်နောက်ကျနေသေးတယ်
( အဲ့သည်ကောင်တွေကို စပွန်ဆာပေးပြီးခေါ်ထားလိုက်ပါလား )
အဲ့သည်အခါကြမှာ ဆရာကြီးတို့ရဲ့ အာဘော်တော် စိတ်ဆန္ဒတော် အယူဆတော်တွေအတိုင်း
ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာ ငပျင်းတွေပါ အကုန်ဖမ်းပြီး စစ်ထဲဝင်ခိုင်းပါ
တရားစခန်းမှာတရားအားထုပ်နေတဲ့ ရောဂီသူတော်စင်တွေကို ငပျင်းတွေပါဆိုပြီးဖမ်းပါ
တိုင်းပြည်ကြီးကို စိတ်တိုင်းကြ ထုံးသုတ်ပါ
လောလောဆယ် ကျုပ်ဂျီးဒေါ်ဂျီးလည်း အားနေတယ် ထုံးသုတ်ကြည့်ဘာလား
ရွာထဲမှာ သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးပိုမြင့်ပြီး ခပ်ဖစ်ဖစ်လေး (သူ့နေရာနဲ့သူ) ရေးတတ်တာ ဘပုပါ။
အခုတောင် ၁၁ မှတ်အပေါင်းနဲ့..
ဘပုက.. သူကများ.. ပြည်ပမနေတာကျနေတာပဲ…
ပြည်ပပြည်ပနဲ့.. ထိုင်းနဲ့မလေးမှာရှိတဲ့.. မြန်မာ ၃-၄သန်း.. ထည့်တောင်မစဉ်းစားကြဖူးမဟုတ်လား..
ကဲ အပြင်က ပြောနေမယ့်အစားအခုလာပြန်လာပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်ကြဗျာ။
အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ ကြည့်ရှုတတ်ဖို့ ကသာအဓိကကျတာပါ။
မိုက်ကယ်ကတော့ မိုက်တယ်ဗျာ၊ ကောင်းပါ့ ဖင်ချွတ်ချိုးရင် ပြောဗျို့ အိမ်ကကောင်ကြီးက အသကုန်ခဲမှာ ခေါ်ခဲ့မယ်၊
ဖုန်းကျော်ရဲ့ တောင်တစ်ချက် မြောက်တစ်ချက် ပို့စ်တွေက အတော်စိတ်ခိုင်မှ ဖတ်လို့ရတာတွေပါကွယ်
ကို ဘုန်းကျော် ။
မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာပြီပဲ ။
ကျနော်လည်း Dual Citizen ရရင်တော့ လိုချင်မိသား ။
ကျနော်ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံသား ဘဝ လေးကို မက်မိတာက ၊
ကျနော့် ရဲ့ ကပ္ပတိန် လက်မှတ်တွေက မြန်မာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ လိုနေသေးတာကိုး ။
နောက်ပြီး ကျနော့်မှာက မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ခြံတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိနေသေးလို့ပါ ။
ကျန်တာတော့ ၊ ဘာမှ သိပ်မက်စရာ မကျန်တော့ပါဘူးလေ ။
ကို ဘုန်းကျော် ကရော ၊ ဘာ့ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ချင်ရတာတုန်း ။
ဘာများ မက်စရာ ကျန်သေးလို့တုန်းဗျာ ။
အောက်ဖေါ်ပြပါတို့မှာ.. မေးလ်ဂရုမှ စာကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်..။
နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာများဘ၀.. ယှဉ်တွေး.. သိကြပါစေသတည်း…။ :harr:
မှနိုင်၊ကျဉ်းကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ -အေအေပီပီ-မှဦးတိတ်နိုင် (ဦးအမည်တပ်၍)အားနိုင်၊ကျဉ်းစိစစ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အဆင့်ကော်မီတီဖွဲ့စည်းရေးမှာပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံရပါသည်။
လည်းဆိုခြင်းအားဇယားချမပြနိုင်တာကိုတွေ့ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။(မှတ်ချက်။ ။
၅။ထောင်ဇာတာအကျိုးပေးကောင်းသောစာရေးသူအတွက်ရေး-ကျောင်းရွာရှေ့တန်းကုန်းမှ၆၁တပ်ရင်းစခန်းဌာနချုပ်-ရတခစစ်ကြောရေးအမ်အိုင်(၅)ကန်၃ကန်
ရင့်နှက်အောင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသလိုသော့ခလောက်ခတ်ထားသောအချုပ်ခန်း အတွင်းမှပြေးပေါက်မရှိအသေအကြေတိုက်ခိုက်ရသော-သွေးဆိုသည်မှာ ကျောက်ပြားကြမ်းပြင်မှာရေစီးသလိုစီးဆင်းနေသော လူမျိုးမတူ-အုပ်စု
များနေ့ စဉ်လစဉ်နှစ်စဉ်အညှင်းပမ်း-အသတ်အဖြတ်ခံနေရသည်မှာနည်းနည်း နှောနှောအရည်အတွက်များမကဖြစ်ပါသည်။
သောပေးဆပ်မှုစွန့် လွှတ်မှုများဖြစ်ပါသည်။(စကားချပ်။ ။ရဲဘော်ရဲစိုးအောင်၏
ဖြတ်ခြင်း-ဗိုက်အောင့်တာကို ဗိုက်ဖောက်လွတ်ခြင်း-အစာရေစာမ၀သဖြင့်အား နည်းချိနွဲ့ သူ အေကိုက်သည်ဆို၍ဆေးထိုးသတ်ခြင်းများစွာသောအဖြစ်အပျက်
၉။ထို့ ကြောင့်ဒီမိုကရေစီရေး-လူ့ အခွင့်အရေး-အလုပ်သမားအရေး-နိုင်ကျဉ်း